Sida Loo Isticmaalo Codbixinta Twitter-ka si kor loogu qaado ka-qaybgalka (Fikrado iyo Tusaalayaal) | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Sida Loo Isticmaalo Codbixinta Twitter-ka si kor loogu qaado ka-qaybgalka (Fikradaha iyo Tusaalooyinka)
Sida Loo Isticmaalo Codbixinta Twitter-ka si kor loogu qaado ka-qaybgalka (Fikradaha iyo Tusaalooyinka)
Waxaa laga yaabaa 29, 2019
Dhib malaha inta raacsan ee aad leedahay, codbixinta Twitter-ka ayaa kaa caawin doona inaad gasho madaxooda. Markaa waxaad garan kartaa waxay u malaynayaan, waxay rabaan, ama waxay samaynayaan. Kaas oo kaa caawin doona inaad go'aamiso waxa aad u samaynayso sumaddaada.
Laakin inta aynaan u galin taas, aan tallaabo degdeg ah dib u qaadno...
Bonus: Soo deji qorshaha 30-maalmood ee bilaashka ah si aad u kobciso Twitter-kaaga si dhakhso leh, Buug-shaqaale maalinle ah oo kaa caawin doona inaad samaysato suuq-geynta Twitter-ka oo aad la socoto kobacaaga, si aad u tusto madaxaaga natiijooyinka dhabta ah hal bil ka dib.
Waa maxay ra'yi ururinta Twitter?
Codbixinta Twitter-ka waxay kuu ogolaaneysaa inaad su'aal ku soo bandhigto dhagaystayaashaada tweet-ka oo leh ilaa afar doorasho oo jawaab ah (laakin waxaad dooran kartaa kaliya laba ama saddex, haddii aad rabto).
Maxaad u malaynaysaa in Instagram ay tijaabinayso ka saarista tirinta sida boostada?
- Hootsuite (@hootsuite) Maajo 13, 2019
Looma hagi karo bog kale. Maya weydiinaya inay buuxiyaan foom. Ma qaadan daqiiqado waqtigooda ah. Waxay qaadataa hal ilbiriqsi ama laba - ugu badnaan.
Iyo...ma sugin natiijooyin sida sahan dhaqameed. Isticmaalayaashu waxay arkaan natiijooyinka isla markiiba. Waxay dib u twitter-ka gelin karaan ra'yi ururintaada dadka kale, iyaga oo u faafinaya si dabiici ah.
Sida cod-bixinta loogu sameeyo Twitter-ka
Way fududahay. Kadib qeexida su'aashaada iyo jawaabahaaga, waxay qaadan doontaa kaliya hal ama laba daqiiqo. Runtii. Ha i rumaysan? Fine-waqti u dhig oo i ogeysii.
1. Bilow Tweet
Guji batoonka Compose Tweet cusub oo ku yaal geeska midig ee sare - sida aad rabto tweet kasta.
2. Bilow ra'yi ururintaada
Riix ikhtiyaarka ku dar ra'yi ururinta ee wada hadalka soo booda. Ku dar qaar ka mid ah hashtagyada khuseeya, @mentions, iyo links Sida tweets-kaaga ka dhig mid gaaban, cad, oo madadaalo leh. Ama wax kasta oo macno kuu calaamad.
3. Ku dar su'aalaha codbixinta
Weydii su'aalaha aad jawaabaha u rabto-marlabaad, ilaa afar. Noqo mid gaar ah ama qalafsan ama caajis ah - waa ra'yi ururintaada.
4. Deji muddada codbixinta
U sheeg Twitter inta maalmood ee aad rabto inaad ku shubto codbixintan (toddoba maalmood ugu badnaan).
5. Buuxi ra'yi ururintaada
Dooro badhanka Tweet ee dhinaca midigta hoose si aad ra'yi ururinta ugu dirto Twitterverse.
Marka ra'yi dhiibashadu dhammaato waxaad arki doonta "Natiijooyinka u dambeeya" oo ku jira tweet-ka.
Markaa… intee ayay qaadatay taasi? Uma baahnid inaan ka jawaabo, horeba waan ogahay. Fudud, haa?
Hadda oo aad taqaan sida loo sameeyo ra'yi ururin, aan u dhex galno sida loo isticmaalo.
Sida loo isticmaalo Codbixinta Twitter-ka si kor loogu qaado ka-qaybgalka (fikrado iyo tusaalooyin ka yimid noocyada ugu sarreeya)
Hal abuur ku samee codbixintaada. Waxaan ku tusi doonaa noocyo kale oo sameeya U isticmaal kuwan dhiirigelin ahaan si aad uga qaybgasho (iyo laga yaabee in aad ka xanaajiso) kuwa raacsan Isticmaal codbixinta si aad nolol ugu abuurto astaantaada, si aad uga baxdo "ho-hum" una aado "haa jahannamo".
Maskaxda ku hay
Marka ay dadku ku sii arkaan astaantaada quudintooda, way sii wadaan inay ka fikiraan, sidoo kale.
Codbixintu waxay aad ugu fiican tahay in dadku 'ku tiirsadaan' xiisaha iyagoo ka jawaabaya su'aalahaaga. Tani waxay sii wada sheekeysiga dhegeystayaashaada. Waxayna siinaysaa dhiirigelin iyo sababo ay ugu soo noqdaan astaantaada.
Abuur codbixino badan si aad dadka ugu riixdo boggaga Twitterka. Waxay jecel yihiin inay arkaan jawaabaha su'aalaha iyaga quseeya.
Bandhiga Late Show wuxuu soo dhigaa ra'yi ururin todobaadle ah oo Twitter ah oo lagu waydiinayo dhagaystayaashooda cidda ku guulaysan doonta dagaalka u dhexeeya dadka iyo jilayaasha.
Yaa ku guuleysan lahaa dagaalka: Genius Apple oo leh beddelaad ama salaamaha Walmart ee qaansada isdhaafka ah? #Friday NightFights
- Stephen Colbert (@StephenAtHome) Febraayo 20, 2016
Marvel Entertainment waxay abuurtaa ra'yi ururin toddobaadle ah taasoo ka dhigaysa sumaddooda mid cusub iyo xarunta taageerayaashooda. Ku dhawaad ​​27,000 ayaa u codeeyay waxa geesiga sare ah si uu u keeno hawshooda samatabbixinta soo socota. Taasi waa hawlgelinta.
#MarvelQuestionOfTheWeek: Waxaad kaliya keeni kartaa mid ka mid ah geesiyaashan howlgalka goobidda iyo samatabbixinta. Yaad doorataa?
- Marvel Entertainment (@Marvel) Sebtembar 1, 2016
PlayStation Nation waxay soo dhejisaa codbixinta ku dhawaad ​​maalin kasta #DailyPoll. Waxay weydiiyaan su'aalo:
Baro waxay dadku ku rabaan alaabadooda
Waxa ay jecel yihiin tartankooda
Markay qorsheynayaan inay iibsadaan
…Iyo tiro badan oo kale oo 'ka waran haddii' si ay u fahmaan dhagaystayaashooda.
#DailyPoll Ma helaysaa Red Dead Redemption 2 usbuucan?
- Qaranka PlayStation (@PSNation) Oktoobar 22, 2018
Dhageyso oo baro
Dhegeysigu waa habka ugu wanaagsan ee lagu dhiso xiriir shaqsiyeed. La mid ah warbaahinta bulshada. Markaad waydiiso kuwa raacsan inay go'aan ka gaadhaan, waxay dareemi doonaan in la maqlay. Oo u dhow astaantaada. Noqo sumadda dhegaysata.
Amazon waxay waydiisay taageerayaasheeda mawduucyada laga hadlayo dhacdada Periscope ee tooska ah. Tani waxay ka caawisay Amazon inay go'aamiso diiradda ay ku hayaan ciyaaraha baahinta.
Waxaan joognaa #CES2016 oo aan kuu ogolaanayno inaad doorato waxa aan dabooleyno. Hadda codee oo daawo Periscope-keena berrito!
- Amazon (@amazon) Janaayo 7, 2016
Podcasts Taxane ah ayaa qayliyay si ay u waydiiyaan inta jeer ee ay tahay podcast (falka). Markaa labadii toddobaadba mar waa markaa. Waa maxay su'aashaada gubanaysa?
Su'aal: kee baa noo cad inaan isticmaalno?
(Dhamaanteen waxaan jeclaan lahayn ikhtiyaar toddobaadle ah. Waan ku maqalnaa. Waad ku mahadsan tahay taageeradaada.)
- Taxane (@serial) Janaayo 15, 2016
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa jawaabaha ay keeneen codbixinta Twitter si aad ula timaadid fikrado ku saabsan nuxurka mustaqbalka.
Eventbrite waxay ku iibisaa tigidhada dhacdooyinka onlayn. Halkan, waxay ka codsadeen taageerayaasha inay ka caawiyaan magaca koorsooyinka. Dad badan ayaa soo galay.
#EventProfs Poll: Magaca aad ugu jeceshahay barnaamijka bixiya koorsooyinka khadka tooska ah ee mowduucyada maareynta dhacdooyinka sida suuqgeynta, kafaala-qaadka & wax ka badan?
- Eventbrite (@eventbrite) Febraayo 2, 2018
U oggolow taageerayaashaadu inay ku darsadaan astaantaada.
Noqo qof hadal badan (oo kicinaya)
CoverGirl waxay iibisaa qurxinta. Codbixintan waxay u muuqataa inay ka caawinayso inay ka qaybgalaan taageerayaasha in ka badan inay qeexaan alaabtooda. Wax kasta oo shaqeeya, sax?
"Iftiin" iyo "Qaawan" ayaa dareenkayga soo jiitay. Si aad u badan, waxay ka dhigtay qoraalkan. Waa maxay hadal kicinaya oo aad u samayn kartaa astaantaada?
Codbixinta maalinta: bushimaha dhalaalaya ama bushimaha qaawan? 💋
- COVERGIRL (@COVERGIRL) Noofambar 4, 2015
Sababtoo ah waqtigu waa wax walba. Hagaag, taasi waa halkii cliché. Laakin u isticmaal wakhtiga marmarsiiyo kale si aad arrimuhu u socdaan.
Krispy Kreme wuxuu sameeyay markii ay bilaabeen ololaha Donut Bowl intii lagu jiray Bowl Super. Waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo dhadhanka macaamiisha ay jecel yihiin inta badan-iyo ugu yar? Kooxaha diiradda saaraya iyo sahannada khadka tooska ah ayaa ah kuwo aad u fiican, laakiin isku day inaad u jarto raacdada ra'yi ururinta Twitterka.
Diyaar ma u tahay inaad u codeyso wareegga xiga ee #DoughnutBowl. Dooro deeqaha ay tahay inay hormariso? Ku codee #codka hoose
- Krispy Kreme (@krispykreme) Janaayo 25, 2016
Ama qaado Airbnb oo waydiisay taageerayaasheeda waxa ay aad u rabaan fasaxa todobaadka ee soo socda. Uma ay baahneen dhacdo heer sare ah, kaliya sabtida aakhirka dheer ee soo socda. Qaado mas'uuliyadda iyada oo aan loo eegin waxa dhacaya, iyo haddii kale.
Todobaadka dheer ee soo socda 🙏. Maxaa loo baahan yahay in loo helo #AirbnbEscape kaaga?
- Airbnb (@Airbnb) Febraayo 13, 2016
U fiirso dhacdooyinka khuseeya astaantaada.
Waa kan sida Dunkin Donuts u isticmaashay ra'yi ururin fasaxa-dhiirigeliyay si uu uga qaybgeliyo dhagaystayaasheeda maalinta #NationalCoffeeDay.
#Maalinta Qaxwada Qaranka ayaa halkan ku dhow! 9.29.18 iibso hal kafee oo kulul, hel hal qaxwo kulul oo bilaash ah (qiimo siman ama ka yar) 🎉 Markaa… 2 kafee, waa maxay qorshahaga ciyaarta? ☕️☕️
- Dunkin' (@dunkindonuts) Sebtembar 26, 2018
Haddii aad u dhiiran tahay waxaa laga yaabaa inaad abuurto "fasax" ku habboon astaantaada.
Ama ka dooro kuwa kale ee aan la tirin karin ee hore u jiray.
Had iyo jeer ma aha in aad ahaato mid togan. Isticmaal niyaddaada xun si aad u heshid waxa dhibaya dadka kale inta lagu jiro wakhtiga qof walba loo malaynayo inuu naftiisa ku raaxaysanayo. 1,780 qof ayaa 'u sheegay sida ay tahay'. U daa guuxa - kuwa kale ayaa raba.
Waa maxay qaybta ugu xun ee #NewYearsEve?
✨🍕 codbixintan waxaa kuu keenay https://t.co/vZO7Lz0DVA #HomeOnNYE 🍕✨
- Domino's Pizza (@dominos) December 28, 2015
Ku dhiiri geli saadaasha
Dhacdooyinka waqtiyeysan waa ammo loogu talagalay kicinta taageerayaasha. Markaa waa in la saadaaliyo waxa dhici doona dhacdooyinkaas. Yaa guulaysan doona? Maxay xidhan doonaan? Maxaa xigi doona? La imow siyaabahaaga si aad uga qaybgasho taageerayaasha ka hor (iyo ka dib) dhacdada weyn.
🏆 waa lagu dejiyay 🏆#Xoog in tirooyin
- Ringer (@ringer) Maajo 26, 2019
Cod-bixinta Twitter-ka looguma talo-gelin in lagu beddelo mid casri ah, kakan, sahamin tifaftiran ama qalabyada kale ee cilmi-baarista suuqa ee u baahan weji toosan.
Maya. Isticmaal ra'yi ururin Twitter-ka si aad bani'aadam ugu noqoto astaantaada. Noqo mid caadi ah, fududow, doqon noqo, caqli badan, caqli badan, caqli badan, geesinimo leh, xarrago leh, soo jiidasho leh iyo wax kasta oo kale si loo caddeeyo inaadan ahayn robot.
Adeegso hashtag si aad isugu xidho codbixintaada—ka dheh agagaarka dhacdo, bilow ama olole kale. Isticmaal hashtagyada qoraalladaada, sidoo kale.
Tani waxay siin doontaa isticmaalayaasha fursad ay ku arkaan codbixintaada hal muuqaal. Waxaan qoray qaar ka mid ah siyaabaha loo isticmaalo hashtags marka la abuurayo hagahaaga warbaahinta bulshada.
Codbixintu waxay aad ugu fiican tahay dejinta macnaha guud iyo waxa laga filayo macluumaadkaaga mustaqbalka, soo saarista alaabta, dhacdooyinka iyo hawlaha kale ee suuqgeyn.
Weydii su'aalo si aad u abuurto buuq oo aad uga dhigto kuwa raacsan inay tagaan 'hmmm', 'wow', 'xiiso', iyo 'si dhib yar ayay u sugi karaan'.
Isticmaal Hootsuite si aad u fuliso qorshahaaga suuq-geynta Twitter-ka oo ay weheliso dhammaan hawlahaaga kale ee warbaahinta bulshada. Hal dashboard waxaad kala socon kartaa wada sheekeysiga, korin kartaa kuwa raacsan, jadwalka tweets, iyo wax ka badan. Isku day bilaash maanta.
Sida loo sameeyo Hagaha Qaabka Sheekooyinka Instagram (iyo waxa lagu daro)
Sida loo cabbiro JPG-ga iPhone kaaga
Tilmaamaha natiijooyinka hodanka ah ee Google ayaa hadda mamnuucaya hubka, daroogooyinka madadaalada, tubaakada & alaabta vaping-ka iyo alaabta khamaarka la xiriirta
Sida loogu haajiro Google Analytics 4: Hage tallaabo-tallaabo ah
Warbaahinta bulshada 735
Sida loogu Isticmaalo Instagram Chatbots Adeegga Macmiilka iyo Iibka